'Amantombazana' Ixesha lesi-5 lokuGqibela kwesiphelo: Hamba ungabaleki | - Itv
Eyona Itv 'Ixesha laMantombazana' 5 Finale Recap: Hamba Musa ukubaleka
'Ixesha laMantombazana' 5 Finale Recap: Hamba Musa ukubaleka
U-Lena Dunham, u-Becky Ann Baker, kunye no-Andrew Rannells.UCraig Blankenhorn / HBO
(Cofa apha ukuze uphinde uphinde ufunde isiqendu 9)
Indawo yokuqala yesi siqendu iquka Amantombazana njengomboniso. UHana uzama ukubaleka, kodwa unokubaleka ngokulingana kwaye aqale. Uzimisele ukuqhubela phambili, kodwa wenza umsebenzi ococekileyo. Okwangoku, kwangaxeshanye, yena ngu Ukuhamba. Masithembe ukuba wonke umntu kumdlalo weqonga angaqhubela phambili, ngandlela ithile encinci, ukuphela kweli xesha lonyaka. INkosi iyazi ukuba bayayidinga.
UHana ugijima ngasendlwini yakhe, kwaye ubona ukuba abazali bakhe bahleli phantsi. Kuvela, beza endaweni yakhe kuba ebengayihoyi zonke iifowuni zabo. Bafuna nje ukuchitha ixesha noHana, kodwa akavumi ukwamkela ukuba utata wakhe osisitabane kunye nomama othe ngqo bavumile ukuhlala kunye. Ke, ukunqanda imeko ngokupheleleyo, uqhubeka nokubaleka.
Ngeli xesha, uMarnie ulele ebhedini noRay, emxelela ukuba kulungile ukuba khange alale- ngokucacileyo, unokuhla kuphela ukuba uyamthiya umntu. Kulungile ichaza okuninzi. Emva koko, uMarnie ucebisa ukuba uRay aye kukhenketho kunye naye kunye noDesi. Unokumnceda kuzo zonke iimfuno zakhe ezininzi, ezininzi zeemvakalelo! Owu, umfumanele amanzi ecoconut kunye neevithamini. Ngokukrakra, uMarnie wacela loo nto. Ude athi, Ndiyazi ukuba awufuni ukuba ngaphandle kwam. Ukuba bebengekho kulonwabo lwasemva komtshato, ndiyathemba ukuba uRay uya kuba nengqondo yokuphepha yonke le meko. Kodwa, kuba wayesandula ukuchukunyiswa yindoda yakhe nguMarnie, uRay uyavuma.
Kwivenkile yekofu yaseRay, uShosh ucwangcisa itheko elichasene nehipster. Umphathi, uHermie, uyithatha kancinci le mbono, kwaye uthatha isigqibo sokuba uza kuyiphatha yonke imvubu njenge hippy I-Disneyland ngo’68. Ewe kuye kwafuneka ndibhekise kuGoogle, kwakhona. Ngokuqinisekileyo, uColin Quinn ungumntu ophambeneyo, kodwa andinakukunceda kodwa ndimthande. Wenza ezinye iimbekiselo zembali.
Kuba uLaird usafuna umfazi we-AWOL, uJessa unceda uAdam ngomntwana. Ukanti uziva ngathi akafumani ntengo ngokwaneleyo kuwo wonke umsebenzi awenzayo. Ngenxa kaThixo, wabukela iividiyo ezimbini ze-YouTube malunga nabantwana. Mbini! Oko kulungiselela ngakumbi kunokwenza kwabazali abaninzi, akunjalo? Emva koko, u-Jessa uxelela uAdam ukuba kufuneka abize uHana acele uncedo, kuba uthanda abantwana ngakumbi kunaye. Ewe kunjalo, ukukhankanywa nje kukaHana kubangela ukuba uAdam akhululeke, kwaye bobabini bakumlo osemthethweni kwakhona.
UHana uyavuma ukuxhoma kunye nabazali bakhe, phantsi komqathango wokuba bobabini bafumana iinwele ezingcono. Ukanti ngelixa bezama ukuthetha naye, uHana ubaxelela ukuba bathule. Ulungiselela isiqwenga esithethiweyo seMoth Story Slam. (Khwaza uThe Moth!) Ke, umama kaHannah unyanzelisa ukuba ezi zibophelelo zibini ngokwenza konke okwenziwa ngumzali nomntwana xa bethiyene-- bayokuthenga.
Ewe, kuvela imisebenzi yokuthenga, kuba uHana kunye nomama wakhe banencoko emnandi. Umama Horvath uxelela uHana ukuba unethemba lokuba uJesa uza kubethwa yimoto- kumnandi kangakanani! Emuva endlwini, uEliya uza kungena ishawa, abalekele kuPapa Horvath. U-Eliya ujongeka ngathi ngumdaka- kudala esenza itheko ukuze alibale ukuba i-ankile emnandi yeendaba iyilahlile iesile. UTata ujongeka elusizi naye- mhlawumbi ngenxa yokuba esenomfazi… kwaye eyindoda esisitabane. Edinga umntu ongutata, uEliya ubeka intloko yakhe esifubeni sikaTad kwaye ucacisa ukuba ufuna ukonwaba, kodwa akakwazi. Ufuna ukunikezela. Ukanti uTad umbeka endaweni yakhe– ukwiminyaka yamashumi amahlanu, kwaye uyaqala. UEliya unobomi obungaka! Uyanyanzelisa ukuba izinto zizolunga.
Ndiyabulela kuThixo, uLaird ubuyile ukuze uAdam afumane ikhefu kusana. UJessa wayengenako ukonwaba- utshaya umdiza phambi kokuba umntwana aphume ngomnyango. Ucebisa ukuba benze into emnandi, kodwa baphinde baphakamise uHana. Ngokucacileyo, uAdam ngu-d-o-n-e uthetha ngaye, kodwa uJessa akayeki. Emva koko, ekugqibeleni uchaza ukuba kutheni igcina kukhankanywa uHana. U-Jessa uyavuma ukuba uziva enetyala ngokweba umhlobo wakhe osenyongweni. Ke, inxenye yakhe iya kuthiya uAdam ubomi bayo bonke, kuba wayitshintsha indlela yakhe yokuziphatha. Kuba aba babini ngabantu abadala, bathatha isigqibo sokuba babenengxoxo efanelekileyo malunga neemvakalelo zabo. Bayadlala, bobabini baqala ukutshayisa izinto phantsi.
Okwangoku, kukhenketho, i-Desi ifumana itoni yoqwalaselo kwii-fangirls zolutsha. Iyavakala loo nto- yena ngu i-dreyamboat e-hunky, ijongeka ilumkile. Kodwa iphi intombi yakhe? Njengoko kuvela, akazukuya kukhenketho. Okwangoku kulungile, kuba ngandlela thile, wonke umntu uyavana. URay noDesi abakhange bathethe kwanto embi komnye nomnye! Kubonakala ngathi banokuqola, emva kwayo yonke loo nto.
Ngokungafaniyo noJesa noAdam, abachitha indlu yakhe ngokupheleleyo. Esi sesinye seziganeko ezenziwa kakuhle kuwo wonke umboniso. Umsindo ovela kuAdam uyoyikisa ngokupheleleyo. Akakholelwa nje ukuba uJesa usafuna ukuba ngumhlobo noHana emva kwalo lonke eli xesha. Emva koko, xa uJessa ebalekela kwigumbi lokuhlambela, ubetha umngxuma ngqo emnyango. UYesu! Oku kubonakala ngathi kukujika, kwaye bobabini bayatshintsha ekukhwazeni nasekuphoseni izinto ekuhlebeleni izithuko ezimbi ngqo ebusweni babanye. Ubuncinci akukho mntu wenzakalayo emzimbeni.
Kwivenkile ethengisa iincwadi zezeMisebenzi yeZindlu – omnye ukhwaza! -UHannah unethemba lokuba igama lakhe liza kukhethwa umnqwazi ukuze lifundwe kwiMoth Story Slam. Ewe umsitho ubanjelwe ngumfazi endimthandayo we-NPR kunye nenenekazi eliqobileyo, u-Ophira Eisenberg. Emva kokubiza ukubulawa kwababali beendaba abahlukeneyo, uHana ekugqibeleni ubizwa. Sele eza kuzisa amanqaku eqongeni, kodwa umntu umxelela ukuba baya kumenza angafaneleki. Yiza, Hana, awuyazi imithetho yeNundu?
Kucacile ukuba uHana unovalo, kodwa uphakama apho nangayiphi na indlela. Oku kulandelayo ngumzuzu ohambayo, owenza ukuba kucace ukuba uHana yenza ubuchule obumangalisayo bokubalisa. Yena unako qhagamshelana neemvakalelo zakhe. UHana umi phambi kwabaphulaphuli, ubaxelele ibali lokuba umhlobo wakhe osenyongweni wamhlutha njani umfana awayethandana naye, kwaye usajongana njani naloo nyani. Ekupheleni kwebali, usixelela ukuba uhambise ibhaskithi yeziqhamo endlwini ka-Adam ukumnqwenelela yena noJesa okona kulungileyo. Emva koko, weva umlo wabo oyindumasi, kwaye akazange azive enyanzelekile ukuba azibandakanye kwidrama. Hayi indlela zen, Hana. Mhlawumbi uhambela phambili!
UShosh wenza ngcono, naye. UHermie, umphathi wevenkile yekofu, wonwabile yindlela eqhuba kakuhle ngayo ivenkile kangangokuba ucotha ukungqungqa naye ngelixa besondela. Ewe, indoda etshatayo iyadansa ngoku! Iyathandeka.
Ewe, uDesi akaziphuculi kwesi siqendu. Endaweni yoko, ufumana i-blowjob kwintombazana egumbini lokunxiba likaMarnie. Ewe, masingalindeli kakhulu kakhulu ngaxeshanye.
Ukudlala! Ngenxa yokuba utata kaHana ekugqibeleni ufumana i-gay yakhe kwakhona! Molo! Okwangoku, kwangaxeshanye, uMama Horvath noEliya basela kalusizi kwiingxowa zamaphepha. UMama ukhathazekile ukuba uzakufa engenzi nto ibalulekileyo. U-Eliya ukhathazekile kuba akazi ukuba uza kubuzalisa njani ubomi bakhe bonke. Ukanti, abo babini basonwabile kunye, kwaye bahleka kunye. Kukho ithemba ngabo okwangoku.
UJesa noAdam balibali elahlukileyo. Bangqongwe ngokoqobo ngamatye omlo wabo… kwaye bahamba ze ngokupheleleyo. Ukuba kukho into enye kulo mboniso, kukuba aba bantu baphela bebathanda abantu abaqhuba bephambana, kwaye ngesiqhelo abenzi bantu bangcono. Nangona kunjalo ngasizathu sithile, bagqibela ngokuhlala nabo, nangayiphi na indlela.
Siphela ngoHana, inenekazi lethu eliphambili, sihamba kancinci esitratweni. Ngokukhawuleza uthatha isantya, kwaye uyeke ukubaleka. Uncumo luwela ubuso bakhe xa ecinga ngento ayiphumezileyo. Uxelele ibali kubaphulaphuli kwaye wafumanisa kwakhona ukuthanda kwakhe ukubhala- ayisiyonto intle leyo! Njengoko ebalekela kwisakhelo somkhenkce, konke endinokucinga kukuba izinto ziya kuba ngcono kuye. Kwaye ndiyathemba ukuba baya kuba ngcono nakomnye umntu, ngokunjalo. UShosh, uMarnie, noHana babonakala ngathi bakumendo olungileyo. Kodwa uAdam noYesa? Andiqinisekanga. Mhlawumbi ibhaskiti yeziqhamo zikaHana izokunceda.
Ifomula yeSuitsupply yoPhuculo oluPhezulu, iiSuti zexabiso eliphantsi
Ixilongo libonakaliswe njengo-Emperor ngaphandle kweengubo
I-Miami's 10 Best Craft Beer Breweries kunye neeBhari
Ingxoxo ebonelelweyo: 'Ubuhle kunye nesilwanyana'
Ngaba ukumkanikazi u-elizabeth uthanda ikate
fumana ulwazi kwinombolo yefowuni
ubusuku basebukhosini (2015)
ukukhangela igama ngenombolo yefowuni
U-richard spencer ozelwe e-usa